Geofumadas - na ọnọdụ dị ugbu a dijitalụ - Geofumadas
Geofumadas - na ọnọdụ dị ugbu a dijitalụ
Eprel, 2020 My egeomates
Etu aga-esi aga igwe Digital nwere ike ịgbanwe ọgịga gị
Gburugburu ebe data ejikọtara abụghị naanị ikwu maka ya, ha na-agagharị n'okporo ụzọ maka ọrụ owuwu ihe gị.
Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ndị ọkachamara injin, ụkpụrụ ụlọ, na ihe owuwu (AEC) na-elekwasị anya n'ịchọta ụzọ ọhụrụ iji bulie oke ma belata mmeghachi omume na azụmahịa ha. Maka na teknụzụ na-eme ọsọ ọsọ, ọ nwere ike isi ike n'ihi na enwere ọtụtụ ebe enwere ozi dịnụ. Ọ bụrụ ihe eji ewepụta oge iji ya.
Mana olee otu o si metụta ahịa anyị kwa ụbọchị? Otu n'ime ndị ọrụ ibe m natara ozi na-atọ ụtọ nke ukwuu n'aka onye nwe ụlọ ọrụ na-eweta ọrụ na-ekwu:
"Ihe ịma aka kasịnụ anyị nwere bụ na ndị ọrụ ngo ahụ na-ekwu okwu n'oge a na - enweta nkwekọrịta nkwekọrịta ahụ, mana mmejuputa ya na - akwụsị, ebe ọ bụ na ọ bụghị ihe dị mkpa maka ndị otu oru ngo. Dịka onye na - azụlite ụlọ, anyị chọrọ ịbụ onye nrụpụta na onye ga - eso ndị nkwekọrịta, ndị ga - abụ ndị mbụ ga - agbaso ma nwee ikike ịnapụta ya. "
O siri ike ikpebi ihe nrụpụta ụlọ na-enye ụbọchị ndị a. Ọ bụ terabyte data, nke enyerefe onye ahịa ya na-enweghị data akụkọ ihe mere eme ma ọ bụ metadata agbakwunye? akwụkwọ ntuziaka mbụ nke onye nrụpụta ihe eji emepụta ihe onyonyo; ma ọ bụ ihe osise na data nke na-agaghị agbaso uru enyere enyere dị ka wuru / nke ikpeazụ?
Usoro jikọtara ọnụ, dị ka ProjectWise na AssetWise, bụ ihe dịịrị onye nwe ihe nwere ụdị ọ bụla. Dịka m tụlere n’isiokwu nke 3 na nke 4 nke usoro a (Otu Isi Eziokwu Si Nwere Ike Transgbanwe Mmepụta Ihe Mmepụta Ihe Mere Ihe Mere I Ji Kwesie Mmezi Usoro Ekike, otu ntabi anya), ọ kacha mma itinye usoro tupu oge agafee.
Enwere ọtụtụ sistemụ dị na ahịa a, ma ọ nweghị otu dabara na ha niile. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na inwere nnukwu akụrụngwa, ịkwesịrị ịtụle nkwụsi ike. Chọghị ka nsogbu ahụ gaa n'ihu, site na imewe ruo na owuwu. Ọtụtụ n'ime ndị ahịa m na-arụ ọrụ na-agakwuru nsogbu a n'ụzọ dị iche. Ha na-akpọ ya "mgbanwe injinia nsogbu."
Ọ bụrụ n ’ị na-achọ mmeri obere oge, ị ga-ejedebe ọtụtụ data gbara ọchịchịrị, nke bụ nsogbu ọzọ. Dịka ndị ahịa, ịchọrọ ka ọrụ gị kwezuo BIM.
Ndị na-arụ ọrụ nwere onwe ha na-ajụ onwe ha ajụjụ atọ ndị a:
Kedu ihe m kwesịrị ijikwa ma ọ bụ azụmaahịa, ọkachasị ebe ọ bụ akụkụ kachasị ogologo nke usoro ọrụ ndụ?
Kedu ihe m chọrọ maka owuwu, nke ahụ na njikwa ego?
Kedu ihe m chọrọ maka imewe na oge a ga-ekwe omume, nke ahụ na njikọ na ngwanrọ njikwa oru ngo?
Iji rute ebe ahụ, ịchọrọ CDE: mpaghara njikọ ejikọtara,
Ọ bụghị gburugburu ebe data.
Usoro abụọ a gbanwere data na oru ngo, mana ejikọtara data gburugburu ebe obibi (CDE) bụ naanị isi mmalite eziokwu dakọtara. CDE ga - ahazi, gbasasịa, chịkọta ma chekwaa data ahụ na ndụ niile nke ọrụ ahụ. Ndụ a bara uru nwere ike ịdịte aka karịa ka ndị mmadụ na-eche, ọkachasị mgbe ị tụlere ọnụ ọgụgụ nrụgharị ọ ga-aga karịa afọ iri atọ. N'ụzọ bụ isi, BIM na-agba mbọ hụ na enwere ozi niile dị n'usoro ziri ezi, na-enye ndị otu aka ịme nhọrọ ziri ezi na ndụ niile nke akụ. Echiche ahụ na-ezighi ezi, ọkachasị n'oge gboo, bụ na BIM bụ maka ịmepụta ụdị 30D dịịrị onwe ha. Nke a abụghị eziokwu. Kama, BIM bu n’uzo otu esi edobe ma ghazie oru.
N'ime etiti BIM, enwere ọrụ dị mkpa: ihe ọmụma onye were ya n'ọrụ chọrọ. Ihe ndi a choro akowaputa ihe omuma nke onye n’oru n’uzo choro imepe iji me ihe bara uru. Onye na-ahụ maka ọrụ na-ewulite akwụkwọ nkwekọrịta na mbido, na-agba mbọ hụ na e mepụtara ozi kwesịrị ekwesị yana ejiri sistemụ arụmọrụ n'oge ọrụ ahụ.
Mgbe anyị na-ekwu maka CDE, okwu ọzọ anyị kwesịrị ịkọwapụta bụ ejima dijitalụ, nke bụ ihe nnọchianya dijitalụ nke njikwa anụ ahụ, usoro, ma ọ bụ usoro, yana ozi injinịa na-enyere anyị aka ịghọta ma gosipụta arụmọrụ ya. Dị ka ọ na-adị, enwere ike imelite dijitalụ dijitalụ ugboro ugboro site na ọtụtụ isi mmalite, gụnyere sensọ na nyocha na-aga n'ihu, iji nọchite anya ọkwa ya, ọnọdụ ọrụ ya, ma ọ bụ ọkwá ya n'oge dị nso. Ejima dijitalụ na-enye ndị ọrụ ohere ịlele mata ọnụ ahịa ha, lelee ọnọdụ, mee nyocha, na ụbụrụ iji buo ma kwalite ịrụ ọrụ bara uru.
A na-eji ejima dijitalụ eme ihe dị ka ụzọ isi kwalite ọrụ na ndozi nke akụ anụ ahụ, gụnyere sistemụ ha na usoro ha. Dika a na-enyocha ozi sitere na ejima dijitalụ, enwere ike ịmụta ọtụtụ ihe, na-enye ndị otu ohere ịlaghachi uru kachasị nke ezigbo ndụ.
Enwere ike ịmụta ihe site na simulators dijitalụ iji hụ mgbe bụ oge kachasị mma iji rụzie akụrụngwa na-emetụtaghị arụmọrụ nke bara uru. Mgbe ịgbakwunye mgbakwunye nke ihe mmetụta na ọgụgụ isi mmadụ, ị ga-enweta nyocha data na ntanetị nke data a na data akụkọ ihe mere eme.
Dabere na ụkpụrụ Gemini nke Center for Digitally Constructed Britain bipụtara na Disemba 2018, ejima dijitalụ bụ "ezigbo ihe nnọchianya dijitalụ nke ihe anụ ahụ." Ihe dị iche na ejima dijitalụ na ụdị dijitalụ ọ bụla bụ njikọta ya na ejima anụ ahụ. " A kọwara National Twin National dị ka "njikọ nke ejima dijitalụ nke ejikọtara data nke ọma."
N'ileghachi anya na ozi email onye ọrụ ibe m natara n'aka onye nwe ụlọ ọrụ na - arụ ọrụ, o doro anya na ndị otu chọrọ ime ka o sie ike dịka o kwere mee na otu igwe ojii.
Ọbụghị naanị ka ewepụrụ ozi ihe ndị mepere emepe n’ime mpaghara, ha na-ekepụta ikike imepe ozi n’atụmatụ arụmọrụ ọhụụ.
Ndị CDE na-ebute ụzọ n'ịgwa ndị kacha mma na ọrụ nkwekọrịta ọrụ na ụlọ ọrụ iwu ahụ. Ihe ndị a bụ ntọala nke cufflinks dijitalụ.
Gini mere eji akọputa ozi ihe omuma nke oma na emefu oru gi
Ihe owuwu na - emewanyewanyewanyewanye ma na-edozi ya gburugburu jikọtara data.
Mgbe mụ na otu onye nrụpụta mechara nwe ezumike nke izu ụka na nnukwu nsogbu na nso nso a na etiti obodo ahụ, ọnọdụ ahụ mere ka m chee echiche banyere etu nkwekọrịta ndị a siri gbanwee ma ga-agbanwe n'ihi nnabata na nnweta data. Mụ na enyi m nọrọ na izu ụka na-ekwu maka imewe na iwu ihe owuwu. Ka ịtọọ ebe a, parampị nke atụmatụ a na-akwụ ụgwọ ụlọ na nzuzo (PRS) kwụ ọtọ.
Nsogbu dị na ọrụ enyi m n'ozuzu, bụ n'ihi nhazigharị ọrụ dị mkpa na ibu ọrụ, ebe enwere usoro mgbanwe dị iche iche. N'iburu oru a n'uche, amalitere m inyocha ego ole ịhagharịrị ụlọ ọrụ ahụ.
Ọ bụrụ na ị gụọ ụfọdụ n'ime ọmụmụ mba ụwa, akụkọ ndị a na-egosi na ọnụahịa ndị a na-akwụ ụgwọ sitere na njehie ndị a na-ezere bụ 5% nke ọrụ ọrụ ahụ. Na-arụ ọrụ ọnụ ọgụgụ ahụ n'ahịa zuru oke, pasent a na-agbakwụnye ihe ruru GBP 5 ijeri (USD 6,1 ijeri) kwa afọ n'ofe UK. Mgbe ị tụlesịrị ọnụ ọgụgụ nke ịdọ aka ná ntị uru a na-enye, ọnụ ahịa a bara uru karịa ogo uru nke ọtụtụ ndị ọrụ ngo na-arụ ọrụ na isi ahịa.
Nchoputa sitere na Get It right Initiative (GIRI) na 2015 gosiputara uru di uku na ihe ijuanya. Ndi GIRI weputara na mkparita uka ahu na ndi kachasi nma nke ulo oru ndi oru injinia. Mgbe gụnyere ego akwụghị ụgwọ na nke na-enweghị atụ, GIRI mere atụmatụ uru ịdị n'etiti 10% na 25% nke ụgwọ ọrụ ahụ, ihe dị ka 10-25 ijeri GBP (12-30 ijeri dollar) kwa afọ.
Nyocha GIRI mere ka amata isi ihe 10 na-akpata njehie, ndị bụ:
Atụmatụ ezughi oke
Mbubreyo imewe mgbanwe
Ihe omuma nke omuma nke oma
Ọdịbendị na-adịghị mma na ịdị mma.
Ozi nhazi ozi nke oma
Nlekọta ezughị oke n ’iwu ụlọ.
Oke nrụgide azụmahịa (ego na oge)
Nchịkwa na njikwa ihe ọjọọ
Nkwuputa na-adighi nma n'etiti ndi otu.
Ezigbo nlekọta nlekọta
Achọpụtara m isiokwu nke njikwa nhazi na-adọrọ mmasị. Nyocha GIRI gosipụtara na enweghị nhazi a haziri ahazi, nke kpatara esemokwu dị n'etiti ụlọ ọrụ nhazi yana n'usoro ọkọnọ na saịtị ahụ, na-eduga n'ịrụgharị, igbu oge na ịba ụba ego.
Agbanyeghị, enwere ụzọ dị mfe maka ọtụtụ nsogbu e mere ka ọ pụta ìhè na akụkọ GIRI: teknụzụ sitere na igwe ojii. Sistemu dịka ProjectWise na SYNCHRO nwere ike belata ọtụtụ n'ime nsogbu ndị a site na ịnye:
Igwe na-eme ka nchekwa ma nwee nchebe ebe enwere ike ịtụlee dọkụmentị, ihe ngosipụta, na ụdị dị na saịtị site na iji ekwentị, dịka ekwentị.
Ike igwu egwu na enweghị nkwekọrịta na ngwa ndị kwesịrị ekwesị ga-esi na saịtị ahụ pụta ozugbo.
Sistemu nke puru inye ihe nlere na iti mkpu iji jide n'aka na oru ngo a na-aga n'ụzọ ziri ezi.
Agbanyeghị, dị ka anyị hụrụ na nyocha Bentley kachasị ọhụrụ (nke a tụlere n'isiokwu m gara aga Kpọghe uru nke Going Digital na Construction), ọtụtụ ndị ọrụ ngo anaghị eji teknụzụ a arụ ọrụ. Nnyocha Bentley chọpụtara na ihe fọrọ nke nta ka ọkara nke ụlọ ọrụ (44.3%) nwere oke ma ọ bụ enweghị elele ụlọ ọrụ ma ọ bụ ọrụ ngo. Agbanyeghi na ọkara nke ndị zaghachirinụ ghọtara mkpa ịnakọta data oru ngo, ha enweghị ike iji ya mee ihe na iji digitization. Lọ ọrụ na-ejighị sistemụ ProjectWise na-efu:
Na-eme ka arụmọrụ na arụmọrụ na-arụ ọrụ
Ndi injinia na-eme atụmatụ iji ihe ruru 40% nke ụbọchị ha na-achọ ozi ma ọ bụ na-eche nbudata faịlụ. Chegodi ịnye mmadụ niile ohere ịnweta data ziri ezi mgbe yana ebe ha chọrọ ya.
Imekọrịta ihe n'enweghị ọgba aghara
Hazie ndị otu gị na mpaghara data jikọtara ọnụ iji belata nkwụsị okwu. Nweta nnabata gbasara data na ndabere niile onye ọ bụla nwere ozi ọhụụ na aka ha.
Nweta obi ike na njikwa na igwe ojii
Jikọọ ìgwè ọrụ gị na eriri ọkọnọ site na ọrụ igwe ojii. Belata ihe mgbochi IT, nsogbu arụmọrụ WAN ngwa ngwa, scalability, yana nchekwa data.
Na njedebe, mụ na enyi m kwetara, site na obere ihe porto, na ụzọ kachasị mma iji zere ịkwa ụta dị oke ọnụ bụ site na anyị ile onwe anyị anya. Enweghị teknụzụ nke digitized, oru ngo ga-emebi oge bara uru (yabụ na-akpata ụgwọ ọrụ) na-abịa ma were mgbanwe mgbanwe.
Kedu ihe mere ị ga - eji chọọ usoro nhazi ọhụụ
Otu isi iyi nke eziokwu nwere ike ịkwalite usoro nhazi gị maka nnabata a ka nma.
Dị ka ọtụtụ ndị njem, m na-aga London na Euston. N'inwe atụmatụ ịrụ kilomita 330 nke ụzọ ụkwụ agbagoro ọhụụ, oru ngo ahụ ewetara nnukwu nsogbu na njem m ruo ugbu a. Ebe ọ bụ na oru ngo a na-eji Bentley's ProjectWise, echela m ihe na-eme n'azụ mgbidi ụlọ ahụ.
Ọ na-enyo na enwere ebe ili ozu nke ihe karịrị mmadụ 40,000 ga-afọdụ ebe ikpo okwu HS2 nke Euston ga-ebi otu ụbọchị. Ihe dịbu ebe nchekwa St James ’Gardens ga-abụ ụzọ mbata ebe ụgbọ oloko na-apụ na London ebe ndị njem na-aga njem ruru 225 mph.
Ijigide ihe ndi mmadu 40,000 dika odi ka oru di omimi maka oru ihe a karie ka imaara uzo uzo London rue HS2. Ka otu ndị ọrụ nnabata ahụ si aga n’ihu, ha ga-eji nwayọ zụlite nghọta nke ihe ndị ahịa chọrọ na otu ahụ ha mere iji mejupụta usoro izizi mbụ, gụnyere ụdị yana ọrụ a.
Ebe m bụ onye njem guzoro n’ọdụ ụgbọ mmiri Euston dị ugbu a, na-achọ ileba anya na ngalaba ozi ma na-achọ ka ụgbọ oloko na-egbu oge nyere ya ikpo okwu, amaara m nke mbụ mgbanwe ole achọrọ maka ọdụ ka ọ rụọ ọrụ nke ọma.
N'oge a, ndị na-ebubata ya ga-ejikọ aka na ndị otu imepụta iji gbalite ma gbasaa ihe achọrọ ka ọ bụrụ nkọwa miri emi nke imepụta ma wuo ihe osise.
Ka otu abụọ ahụ na-aga n'ihu, ọ na-adị jụụ tupu oke mmiri mmiri, tupu oke ebili mmiri nke mgbanwe na mgbanwe ụdị. Ndozigharị imewe, mbipụta na ibu ọrụ nwere ike ibute esemokwu n'etiti ndị nrụpụta na otu mbịpụta ọ bụla.
Nyocha ndị a na-ewe oge maka ndị otu ahụ imepụta na ndekọ, tinyere nkụda mmụọ iji nyochaa, kwado, ma kuzie usoro ọkọnọ maka nnyefe.
Ọ bụrụ na anyị laghachi azụ na mmalite nke oru ngo ọ bụla, ọ bụghị naanị nnukwu akụrụngwa akụrụngwa, onye ahịa ga-esonyere ndị otu ahụ ma chepụta nchịkọta ihe ọrụ ahụ chọrọ. N'ime nchịkọta ahụ, onye ahịa ahụ ga-ewepụta ọtụtụ arụmọrụ na ihe ndị achọrọ, nke ihe nrụpụta ahụ ga-ezurịrị.
Mmekọrịta a na onye ahịa ya ga-eso ụzọ anọ ndị a:
Usoro mmemme / nhazi
Ihe osise eserese / eserese
M ka na-echeta mgbe m malitere ọrụ iwu ihe owuwu ahụ. Laa azụ n'oge ahụ, mkparịta ụka ndị ahịa a gaara abụ site na mpempe akwụkwọ, isi amonia site na ndị na-ede akwụkwọ na-ejuputa ụlọ ahụ ka ha na-akwadebe ngwugwu ma mebisie ya na usoro mmụta achọrọ. Taa, ọ bụ data na ụdị 3D nwere ike ime ka ihe gbagwojuru anya.
Agbanyeghị, enwere usoro iji zere nsogbu ndị a. Sọftụwia dịka ProjectWise na SYNCHRO na-ahapụ ndị otu imewe iwu na 3D tupu ha ewu ma kesaa data ahụ n'ụzọ a na-achịkwa na mmekorita. Ọ bụghị naanị na omume a na - eme ka nkwukọrịta dị n'etiti ndị niile metụtara ya na ndị otu ihe niile mepụtara, mana ọ nwere ike belata nchekasị nke ọdịiche dị na oru ngo ọ bụla. Anyị maara site n'ọmụmụ ihe anyị, yana ndị ụlọ ọrụ dị ka McKinsey rụrụ, na 20% nke nnukwu ọrụ na-ejupụta ma 80% gafere mmefu ego.
Mkpa ịchịkwa ma belata ọdịiche ndị a dị mkpa.
Ọ bụrụ na -emehie mmejọ, usoro dị ugbu a na-eme ka ọ dị mfe ịrụzi njehie ahụ. Nkwupụta dị mkpa bụ na mgbanwe na ozi na-ekerịta ngwa ngwa, na-ekwe ka ndị otu na-ebuga ya na ntinye ya na-emeghachi omume n'ụzọ na-akpata mmetụ kachasị na saịtị ahụ.
Ọ bụrụ na anyị lelee akụkọ kachasị ọhụrụ sitere na Ngalaba gburugburu, nri na ime obodo (DEFRA), mkpofu ihe owuwu ka dị oke egwu na ọtụtụ na-abịa site na ịwagharị. Omume a ga - emesị chebe ego, oge, na ihe.
Mott MacDonald hụrụ uru ndị a mgbe o mere otu usoro eziokwu maka ọrụ ya na Thames Tideway East Project. Dịka onye na-ahụ maka nhazi, nzukọ a chọrọ iji meziwanye usoro mmiri ochie London dị ize ndụ. Na mgbakwunye na ijikwa ọrụ dị mgbagwoju anya $ 4.000bn ($ 4.900bn), a gbara Mott MacDonald aka ibute ya afọ abụọ tupu oge nhazi. Agbanyeghị, ọ bụrụ na nzukọ a enweghị ike ikwe ka mmekorita na-enweghị nhụsianya gafee otu ndị ọrụ ya gbatịrị agbatị, ọ nwere ihe ọghọm nke ịda n’azụ na ịghara ime ihe ndị dị mkpa.
Iji nwee ihe ịga nke ọma, Mott MacDonald kwesịrị ijide n'aka na ndị otu ọrụ ya, nke gụnyere ndị otu sitere na ọtụtụ ọgbakọ dị iche iche, ụkpụrụ ịhazi, na ebe dị iche iche, nwere ike ịnweta ma gbanwe ozi kachasị ọhụrụ na gburugburu ebe a na-achịkwa. Mott MacDonald mezuru oke a site n’ịchịkọtara ndị otu ya na imepụta ọdịnaya n'ime mpaghara data ejikọtara. Ndị otu otu gafegoro usoro ọzụzụ 12 dị ugbu a nwere ike ịmepụta, gbanwee ma chekwaa puku puku ga-ebuga ya n'otu ebe, ndị otu na-esonye ga-enweta ya ngwa ngwa n'ofe Europe, gụnyere ndị ahịa maka nyocha na nkwado.
Site na ime ka mmekorita oru a guzosie ike, Mott MacDonald nyefere ndi ahia aka ka odi nma karie oge a ma o ghaputara ya:
Ego 32% na oge mmeputa
80% ngwa ngwa nweta akwụkwọ na ntụkwasị obi niile ndị sonyere na mmemme
Nkwado 76% nke ngwugwu ndị ahịa na nke mbụ.
Dika komputa weputara nsogbu nke sisitemu, ngwa dika ProjectWise na SYNCHRO nwere ike inyere gi aka ijikwa ozi oru ngo site na iguzo otu uzo nke eziokwu iji chekwaa oge ma belata ihe egwu site na ijide na ihe omuma ohuru bu. Esoro, jisiri ma nweta ya site na ọrụ gị. Cenweta mmekorita otu na ngwanrọ na-enyere aka mee ka ndị otu gị dị n'otu na gburugburu ebe data nwere njikọ. Ọ ga - eme ka arụpụtaghị ihe ọ bụla ma hụ na a na - achọrọ ma na - ejikwa ozi site na mmezi ọrụ ọnụ.
Nlekọta oru ngo ka mma nwere ike iduga nghọta ka mma maka mkpebi ndị bịara n'oge na nke kapịrị ọnụ. Ọ ga - enyere gị aka imeri ihe mgbochi nwere ike ibute ọrụ a ka ị na - amụba nghọta ya n'ozuzu ya. Mgbe akụkọ Crossrail ọhụrụ sitere na Kọmitii Commons na Akaụntụ Ọha katọrọ njikwa onye ọrụ ya na ọrụ ahụ, o doro anya na enwere nnukwu mkpa maka idoanya na ọrụ niile, gụnyere na ọdụ ụgbọ oloko Euston na HS2 ọhụrụ. .
Otu uzo eziokwu ga - esi agbanwe igwe ihe eji eme ihe
Site na ọtụtụ ntinye data na ihe mmetụta, ọ dịbeghị mkpa maka ndị na-ese ihe na ndị ọrụ ngo iji otu isi eziokwu.
N'oge na-adịbeghị anya na New York City, anyị nụrụ na a ga-amachibidoro ịme ụlọ mbara igwe dị ka akụkụ nke iji belata ikuku anwụrụ ọkụ site na 30%. Magazin Bill de Blasio kwuru na skyscrapers nwere ihu n'ihu "enweghị atụ" n'ihi na ike dị ukwuu na-agba site na iko ahụ.
de Blasio na-ezube iwepụta iwu ga-egbochi iwu ụlọ skyscrapers ọhụrụ ma chọọ ka enwete ụlọ ndị dị ugbua ka ọ dị mkpa iji zute ụkpụrụ ikuku ọhụrụ.
Nrụgide nke ndị imewe ugbu a dị ukwuu karịa. Anyị ahụla ọtụtụ oge na ọrụ nhazi nke taa dị mgbagwoju anya ma na-achọsi ike karịa mgbe ọ bụla. Agbanyeghị, ebe ndị isi obodo na-arị elu na-ekwu okwu banyere imewe na arụmọrụ, gụnyere London Mayor Sadiq Kan na-ajụ atụmatụ maka mbara igwe ọhụụ nke Foster + Partners mebere, ndị na-emepụta ga-alaghachi na tebụl. chepụta iji chepụta ihe abụghị naanị aesthetically chọrọ kamakwa mmadụ na gburugburu ebe obibi
Site na ụgwọ nke enwere ike de Blasio, anyị nwere ike ịhụ mmụba zuru ụwa ọnụ nke ndị nwere mmetụta n'ọrụ anyị, nke bụ ozi ọma maka ejima dijitalụ na ejima arụmọrụ. Ka osila di, ihe omuma nke ndi imewe na ndi otu n’enye ha akwalitela nke oma inyocha teknụzụ ohuru. Dika oru ngo a na-eto n’otutu ma dikwa mgbagwoju anya, otu a ka odi n’otu n’enye ndi otu oru n’enye ha. Site na nsuso eserese niile, ihe omuma ihe omuma a nwere ike idi mgbagwoju anya karia oru ngo a n’onwe ya.
E nwere nnukwu mkpa maka njikwa oru ngo sitere na ọkwa mbụ nke ọrụ a, na-enye ndị otu aka ịchịkwa iwepụta ihe ọmụma. N'inwe nnukwu data ugbu a na ọrụ, achọrọ maka otu isi mmalite kachasị nke eziokwu. You nwere ike ịmatakwu banyere isiokwu ndị a site na ịgụ akwụkwọ m gara aga na data silos (Ihe kpatara ị ga - eji zere ịbelata data maka nleba anya na ọrụ ụgbọ ala) na nnukwu data. Otu isi iyi a nke eziokwu ga - ejikwa usoro ọrụ niile na - arụ ọrụ ma na - agbaso usoro nkwekọrịta. Enwere ike ịmetụta usoro ọrụ ndị a na arịrịọ mgbanwe ma ọ bụ mgbanwe dị mfe. Akwụkwọ ndị a n'otu n'otu ga-enwe ụzọ nke ọ ga-eso ma mechie ya.
A na-arịọrịrị ụlọ ọrụ na-ewu iwu ka ịmepụta otu ebe nchekwa, otu ụzọ eziokwu. Na UK, gọọmentị na-achọ ọrụ maka ụlọ ọrụ iji weta 'data eri ọla edo', nke pụtara na ụlọ ọ bụla ga-enwerịrị ihe ndekọ dijitalụ nke akụ niile. Dịka a na-arịọkwu ndị mmadụ na ndị na-echepụta ma na-ebubata ndị na-ebubata data, ụzọ kachasị mma iji jikwaa ọnụego data a bụ site na njikwa nkwekọrịta site na iji usoro ọrụ arụmọrụ.
Iji gburugburu ebe mepere emepe ma jikọọ data dị mkpa dịka ọ ga - enye ndị otu otu akara aka iji jikwaa data niile. Nke a bụ ebe ProjectWise dabeere na Bentley Jikọtara Data gburugburu nwere ike inyere aka ịchịkwa data ahụ wee nye otu isi eziokwu, ebe na-agbanwe agbanwe nke ukwuu kwa ụbọchị.
Ọnọdụ data ejikọtara ọnụ bụ isi ihe maka ọrụ ọ bụla. Ọ na - ebelata nchekasị ma na - enye ndị otu ohere ịnweta ozi niile achọrọ, ọ bụrụ na ọ haziri okwu, RFIs, arịrịọ mgbanwe ma ọ bụ akwụkwọ nkwekọrịta. Enwere ike ile ozi a anya dị ka mpempe akwụkwọ PDF dị mfe ma ọ bụ dịka ihe atụ 3D.
N'iji usoro ọrụ arụpụtara, ndị otu otu ga-ahụ na-agbanwe agbanwe nke ha chọrọ na usoro mkpebi ahụ, na-enye ha ohere ịme mkpebi ahụ ngwa ngwa.
Iji igwe ojii na-aputa ihe n’igwe putara na ndi otu a nwere enweta ihe nile edere na ha, ma obu site na ngwa mkpanaka di n’ebe a ma obu komputa komputa di n’ime onodu. Ike a na-eme ka onye ọ bụla mara nke ọma n’atụmatụ ọrụ a.
Iji otu isi iyi nke eziokwu belata ọnụ ọgụgụ nke njehie mgbe ị na-ebugharị data site n'otu usoro gaa na nke ọzọ. Njirimara a na - ebelata oge iji chọwa ozi ziri ezi, belata ọnụọgụ arụ nke njehie dị na saịtị ahụ.
Oru oru a choro ga adi iche na oru ngo rue n’onye ozo, n’ihi nkwekorita nkwekorita ya na ndi mmadu choro ikwurita okwu. Ya mere, okike nke usoro ọrụ ndị a kwesịrị ịdị mfe ma gbanwee ka ọ bụrụ, dịka ụlọ ọrụ, ị nwere ike ijide ọrụ gị n'usoro ezi uche dị na ya. Iji sistemụ dị ka ProjectWise ga-enye ọhụụ kachasị mma na usoro ọrụ na-achịkwa. Ya mere, site n’inye ihe di nkpa ma di nkpa, a ga-ekpochapu amata ihe na esemokwu
Ihe atụ nke otu nzukọ nke jiri ProjectWise mee ihe maka ọhụụ kachasị mma yana njikwa ọrụ na-achịkwa bụ mmekorita dị n'etiti Dragados SA na London Underground Limited.
Ndi otu a bu ndi na elekota oru ha 6.07 ijeri GBP ($ 7.42 ijeri) maka Bank-Monument Station, otu n'ime usoro ụgbọ okporo ígwè UK dịkarịsịrị warara.
Iji nwee ihe ịga nke ọma, Dragados na London London dị mkpa iji jikwaa netwọ ndị nwere ọrụ mmekọrịta, gụnyere ndị ọrụ 425 mmadu Ụlọ ọrụ 30 dị iche iche, iji hụ na e kere puku kwuru puku ihe eji emepụta ihe, na-enyocha ma kwadoro ya n’enweghị ihe ọghọm.
6.07 ijeri GBP (7.42 BIL USD)
30 AKW .KWỌ
Ọtụtụ puku ihe ngosipụta enwere ike ịkọwapụta, na-enyocha ma tinye ya na enweghị ihe ọghọm.
Were Bentley Digital Assessment ma hụ otu ị nwere ike isi nwee ọganihu na azụmaahịa gị.
Onye edemede | Mark Coates
Onye isi ahia ahia ahia na nnabata nke oru
Banyere Bentley Systems
Bentley Systems bu onye n’enye kachasi ike n ’uwa ihe ngbochu n’ ndi injinia, ihe nlere, ndi okacha amara, ndi na ewuru ya ihe eji eme ya. Injinia na ngwa BIM dabere na Bentley MicroStation, yana ọrụ ya Ejima Cloud, nnyefe ọrụ ngo (ProjectWise) na arụmọrụ bara uru (AssetWise) nke njem na ọrụ ọha, ọrụ uto, osisi na ụlọ ọrụ akụrụngwa, na azụmaahịa na ụlọ ọrụ.
Bentley Systems na-eji ihe karịrị ndị ọrụ 3,500 arụ ọrụ, na-akpata ego kwa afọ nke $ 700 nde na mba 170, ma tinye ihe karịrị $ 1 ​​ijeri nyocha, mmepe, na ihe ndị ọzọ kemgbe 2014. Kemgbe mmalite ya na 1984, ụlọ ọrụ ahụ ka nwere ọtụtụ ndị ingmụnna Bentley ise guzobere. A na-ejide mbak Bentley site na ọkpụkpọ oku n’ahịa NASDAQ.
Previous Post«Previous Obodo dijitalụ - otu anyị nwere ike isi jiri teknụzụ dị iche iche dịka ihe SIEMENS na-enye
Next Post Geomatics na Earth Sciences na 2050Osote "